“ဒိန်ချဉ် တစ်ထုပ်(၅၀၀) ပူတင်း တစ်ဗူး (၃၀၀)” ဒါကိုပဲ Non-Stop အိမ်ရှေ့ မှာ အော်နေတဲ့ ဘဲကို ကွိုင်ဖို့ အောက်ဆင်း လာမိတယ် – Let Pan Daily
“ဒိန်ချဉ် တစ်ထုပ်(၅၀၀) ပူတင်း တစ်ဗူး (၃၀၀)” ဒါကိုပဲ Non-Stop အိမ်ရှေ့ မှာ အော်နေတဲ့ ဘဲကို ကွိုင်ဖို့ အောက်ဆင်း လာမိတယ်
Let Pan | October 21, 2020 | News | No Comments
“ဒိန်ချဉ် တစ်ထုပ်(၅၀၀) ပူတင်းတစ်ဗူး (၃၀၀)” !!! ဒါကိုပဲ Non-Stop အိမ်ရှေ့မှာ အော်နေတဲ့ဘဲကို ကွိုင်ဖို့အောက်ဆင်းလာမိတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ အသက်(၆၀)လောက် အန်ကယ်တယောက် ဖြစ်နေတယ်။Taxi ဆွဲတဲ့ကားမှာ နောက်ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးဝယ်သူမျှော်နေပုံကြောင့် စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ ကြည့်ရတာက တစ်ခါမှ ဈေးရောင်းဘူးပုံလည်း မပေါ်ဘူး။’ဦး… လက်ကိုင်ဟွန်းအသံလေးကို နည်းနည်းလျော့ပါလား၊ ဆက်တိုက်ကြီး Non Stop ထွက်နေတော့ နားထောင်ရတာ အဆင်မပြေဘူး။’
‘အေးကွာ ငါလည်းတစ်ခါမှ ဈေးမရောင်းဘူးဘူး။ Taxi ဆွဲရတာ အဆင်မပြေလို့ မိန်းမလုပ်ပေး တဲ့ ဒိန်ချဉ် နဲ့ ပူတင်းလေး ပတ်ရောင်းနေတာ။ဒါရီး မင်းချိန်တတ်ရင် ချိန်ပေးစမ်းပါကွာ။ ငါလည်း နားညည်းနေပြီ’ ဆိုပြီး သူ့လက်ကိုင်ဟွန်းကြီး ကိုယ့်ထိုးပေးပါလေရော။ကိုယ်လည်း ဆက်တင်လေးဟိုချိန်ဒီချိန် လုပ်ပေးရင်း’ဒီအသံကြီးက မမိုက်ဘူး။ ကျနော် ပြန်အော်ပေးမယ်…’ ဆိုတော့
‘ချကွာ’ တဲ့ …ကိုယ်လည်း ဘယ်ရမလဲ။’သဘာဝ ဒိန်ချဉ် … တစ်ထုပ်(၅၀၀)ဟုမ်းမိတ် ပူတင်း… တစ်ဗူး (၃၀၀)’ဆိုပြီး Value Added လေးပါ အဆစ်ထည့်အော်ပေး လိုက်တယ်။ နားထောင်ကြည့်တော့ ဘိုးတော်က သဘောကျသွားတယ်။ ရော့ကွာ ‘မင်း ပူတင်း(၁)ဗူး စားသွား’တဲ့’နေပါစေ အန်ကယ်… ကျနော်ဝယ်ပြီး အားပေးပါမယ်’ဆိုပြီးဒိန်ချဉ် (၂)ထုပ်နဲ့ ပူတင်း(၃)ဗူး အားပေးလိုက်တယ်။
အံမယ်…ငါ့အသံလေး နဲ့ နား…နားပြီး အော်ထားတာလေးကြတော့ နားထောင် လို့ကောင်းသား …ဟ။
“ရောင်းကောင်းပါစေ အန်ကယ်” !!!
“ဒိန္ခ်ဥ္ တစ္ထုပ္(၅၀၀) ပူတင္းတစ္ဗူး (၃၀၀)” !!! ဒါကိုပဲ Non-Stop အိမ္ေရွ႕မွာ ေအာ္ေနတဲ့ဘဲကို ကြိဳင္ဖို႔ေအာက္ဆင္းလာမိတယ္။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အသက္(၆၀)ေလာက္ အန္ကယ္တေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္။Taxi ဆြဲတဲ့ကားမွာ ေနာက္ဖုံးေလးဖြင့္ၿပီးဝယ္သူေမွ်ာ္ေနပုံေၾကာင့္ စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး။ ၾကည့္ရတာက တစ္ခါမွ ေဈးေရာင္းဘူးပုံလည္း မေပၚဘူး။’ဦး… လက္ကိုင္ဟြန္းအသံေလးကို နည္းနည္းေလ်ာ့ပါလား၊ ဆက္တိုက္ႀကီး Non Stop ထြက္ေနေတာ့ နားေထာင္ရတာ အဆင္မေျပဘူး။’
‘ေအးကြာ ငါလည္းတစ္ခါမွ ေဈးမေရာင္းဘူးဘူး။ Taxi ဆြဲရတာ အဆင္မေျပလို႔ မိန္းမလုပ္ေပး တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ နဲ႔ ပူတင္းေလး ပတ္ေရာင္းေနတာ။ဒါရီး မင္းခ်ိန္တတ္ရင္ ခ်ိန္ေပးစမ္းပါကြာ။ ငါလည္း နားညည္းေနၿပီ’ ဆိုၿပီး သူ႔လက္ကိုင္ဟြန္းႀကီး ကိုယ့္ထိုးေပးပါေလေရာ။ကိုယ္လည္း ဆက္တင္ေလးဟိုခ်ိန္ဒီခ်ိန္ လုပ္ေပးရင္း’ဒီအသံႀကီးက မမိုက္ဘူး။ က်ေနာ္ ျပန္ေအာ္ေပးမယ္…’ ဆိုေတာ့
‘ခ်ကြာ’ တဲ့ …ကိုယ္လည္း ဘယ္ရမလဲ။’သဘာဝ ဒိန္ခ်ဥ္ … တစ္ထုပ္(၅၀၀)ဟုမ္းမိတ္ ပူတင္း… တစ္ဗူး (၃၀၀)’ဆိုၿပီး Value Added ေလးပါ အဆစ္ထည့္ေအာ္ေပး လိုက္တယ္။ နားေထာင္ၾကည့္ေတာ့ ဘိုးေတာ္က သေဘာက်သြားတယ္။ ေရာ့ကြာ ‘မင္း ပူတင္း(၁)ဗူး စားသြား’တဲ့’ေနပါေစ အန္ကယ္… က်ေနာ္ဝယ္ၿပီး အားေပးပါမယ္’ဆိုၿပီးဒိန္ခ်ဥ္ (၂)ထုပ္နဲ႔ ပူတင္း(၃)ဗူး အားေပးလိုက္တယ္။
အံမယ္…ငါ့အသံေလး နဲ႔ နား…နားၿပီး ေအာ္ထားတာေလးၾကေတာ့ နားေထာင္ လို႔ေကာင္းသား …ဟ။
“ေရာင္းေကာင္းပါေစ အန္ကယ္” !!!
ကြည့်သူတိုင် ရင်ဖိုသွား အောင် ခါးလေးကို မထိတထိ လှုပ်ခါပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ ဗီဒီယို
ရန်ကုန် မြို့ လှည်းတန်း လမ်းဆုံက လှည်းတန်း စင်တာရှေ့ မှာ လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီး ကို ပူးပေါင်းပါ၀◌င်ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာရှင်များ
ကြည့်မိသူတိုင်း အထင်းသား ဖြစ်သွားစေရ မယ့် မော်ဒယ်ခင် အင်ကြင်းကျော် အလှများ
ဒါဖတ်ပြီး မှ ဗယ်လင်တိုင်းမ်စ်ဒေး မှာ ချစ်သူ နဲ့ ဒိတ် လုပ်ပါ